Tun Tun's Photo Diary: Singapore Motorshow 2015
2015-Jan-17, Singapore Motorshow ဆိုလို. ကားပုံတွေ မြင်ရမယ် ထင်မနေနဲ.နော်။ လူပုံတွေချည်းပဲ။ :P ကျွန်တော်က Portrait ရိုက်ရတာ ပိုအားသန်တော့ ဒါမျိုးပွဲတွေကို ခဏခဏသွားဖြစ်တယ်။ ဘာလို. Portrait ရိုက်ရတာ ကြိုက်သလဲဆိုတော့ ပိုပြီး challenging ဖြစ်လို.ပါ။ Landscape ပုံတွေကို တော်တော်များ ကင်မရာရှိတဲ့ လူတိုင်း ရိုက်နိုင်ပေမယ့်၊ Portrait ကိုတော့ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်ဘူးလို. ထင်ပါတယ်။ မလုပ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေက -
၁။ မော်ဒယ်ကို ကြောက်တာ၊ အားနာတာ၊ ရှက်တာ နဲ. ပေါ်တင်မရိုက်ပဲ ချောင်းရိုက်တဲ့သူ
၂။ မော်ဒယ်နဲ. အပေးအယူ မတည့်တဲ့သူ
၃။ မော်ဒယ်ကို မညွန်ကြားပဲ မော်ဒယ်လုပ်သမျှ အကုန်ရိုက်တဲ့သူ
၂။ Portrait Retouching မလုပ်တက်တဲ့သူ
၃။ Portrait ရိုက်ဖို. မုန်ကန်တဲ့ camera setting မသုံးတက်သေးတဲ့သူ
၄။ Lighting (Natural Light, Reflector light, External Flash) တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးတက်သေးတဲ့သူ
စတဲ့ အချက်တွေကို မကျွမ်းကျင်ရင် Portrait ပုံကောင်းကောင်း ရဖို. အခက်အခဲ ရှိနေဦးမှာပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ. Portrait ကိုအားသန်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အကျွမ်းအကျင်ကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး။ လေ့လာနေဆဲ စမ်းသပ်နေဆဲ အဆင့်သာ ရှိပါသေးတယ်။ အဓိကတော့ အမြဲတမ်း ရိုက်ပေးနေဖို.ပါပဲ။
ပွဲက တော့ Suntec City မှာပါ။ ပွဲဝင်ကြေး S$6 ပေးရပါတယ်။ ပွဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ်သဘောကျတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို စိက်ကြိုက်ဓါတ်ပုံ ရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လူအရမ်းအုံနေတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို သိပ်ပြီး ဦးစားပေးပြီး ရိုက်မနေတော့ဘူး။
ဒီလို မော်ဒယ်တွေ ရှေ.ဆို လူတွေ အုံးအုံးကြွတ်ကြွတ်။ တိုးဝှေ.ပြီး ရိုက်ရတာ သဘောမကျဘူး။ ပုံကောင်းလဲ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် တစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ရိုက်ကြည့်ပြီး မျက်စိနဲ.ပဲ ကြည့်ခဲ့တယ်။း)
Cosplay at motorshow.
ကားတွေ၊ မော်ဒယ်တွေအပြင် တခြား အစီအစဉ်တွေလဲ ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူက ကိုယ်မသိတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊ မော်ဒယ်တွေ လဲ ဖျော်ဖြေပါတယ်။
ဒါကတော့ Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC Lens ကို စမ်းချင်လို. ရိုက်ခဲ့တာပါ။ 300mm ကိုထားပြီး ရိုက်တာ ဒီလောက်ပုံထွက်တာ မဆိုးဘူးလို.ပြောရမယ်။ ဒီ Lens ကိုဝယ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဈေးချိုပြီး ၊ Zoom အဝေးကြီးဆွဲလို.တော့ ကိုယ်ရိုက်တာ သူများမသိဘူးလေ။း) နောက်ပြီး Zoo တွေ မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်လဲ အဆင်ပြေတယ်။
at 3/02/2015 06:30:00 PM
Labels: Event, Model, Portrait, Singapore